Paradisa Vaovao Ho An’ny Sarimihetsika Ve I Maraoka ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Novambra 2017 7:04 GMT
(Marihina fa tamin'ny 6 Aogositra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Toerana ankafizin'ny mpanatontosa sarimihetsika vahiny efa hatry ny ela i Maraoka. Toy izany ny horonantsary fanta-daza La Dernière Tentation du Christ na ny Lawrence d'Arabie, sy ny horonantsary vao haingana toy ny Détention secrète na ny La Chute du faucon noir, dia samy nampiasa an'i Maraoka ho endri-tanàna avokoa. Tsy nampiasa fotsiny ny endri-tanànan'i Maraoka ny sarimihetsika hafa toa ny Babel fa ny kolontsainy sy ny mponina ao aminy ihany koa. Ary farany, namokatra fahombiazana iraisam-pirenena tao anatin'ny taona vitsivitsy ny orinasan'ny sarimihetsika izay miroborobo tokoa ao Maraoka : Ali Zaoua, prince de la rue an'i Nabil Ayouch dia nisongadina tany ivelany ary nahazo fampitahana tamin'ny sarimihetsika Breziliana La Cité de Dieu, raha ny MaRock kosa dia niavaka satria ilay vehivavy Laïla Marrakchi no nanatontosa ity sarimihetsika ity .
Miresaka momba ity lohahevitra ity ireo bilaogy, indrindra fa ny an'ilay mpila ravinahitra (any Eoropa ) Marrakech Xanthe Pat izay nampatsiahy ny tantaran'ny sarimihetsika tao Maraoka:
Gaga aho nahita taorian'ny fikarohana maromaro fa efa nisy ny sarimihetsika notontosaina tany Maraoka tamin'ny taona 1897 (Le Chevrier marocain an'i Louis Lumière), na dia efa ho 20 taona taty aoriana aza vao nisy ny faharoa. Kanefa nanaraka tsy tapaka ny famokarana ireo sarimihetsika avy eo izay saika isan-taona mihitsy, nataon'ny mpanatontosa Frantsay, Espaniola, Alemà izay tonga tany Maraoka mba hamokatra karazana horonantsary amin'ny anarana hafakely.
Nofintininy tamin'ny fanolorana anarana vaovao ho an'ny orinasan'ny sarimihetsika Maraokana ny lahatsorany:
Fa nahoana no i Maraoka? Moa ve noho ireo endriky ny tanàna samihafa, satria manana tendrombohitra maro, tany efitra, morontsiraka tsara tarehy, vakoka mahatalanjona i Maraoka, sa noho ny hazavana tsara tarehy sy ny toetany mibaliaka masoandro no manintona ireo mpamokatra sarimihetsika sy mpanakanto eto amin'ity firenena ity? Tsy lasa Hollywood vaovao ve i Maraoka , ary tsy efa afaka manomboka miantso azy hoe “MollyWood” ve isika?
Ahitana ilay bilaogera mahay manokana ny sehatry ny sarimihetsika, Allal El Alaoui mihitsy ny tontolon'ny bilaogy Maraokana, izay namoaka ny bilaogy cinema and movies. Tao amin'ny lahatsoratra vao haingana, nanoritsoritra ny Fetibe Iraisam-pirenena ho an'ny Sarimihetsika sy ny Sarimiaina tao Meknes izy:
Na dia tsy nahazo fanohanana ara-teknika avy amin'ny tale ara-javakanto na avy tamin'ny mpandrindra ara-teknika aza ny fetibe tao Meknes 2008 notadiavin'ny Wali (prefe) ao Meknes Tafilalet Hassan Aourid dia nisy ny zavatra tsara tarehy tsy nampino sy niavaka nandritra ity hetsika ara-kolontsaina ity, indrindra fa ireo mpanakanto izay nampiseho ny talentany tao amin'ny fonjan'i Kara (antsoina ihany koa hoe Qobat Assoufara), izay tena mahalosotena amin'ny fisokafana izay miha-fantatr'i Maraoka, hoy i Leïla El Baaj, filohan'ny fikambanana.
Miroso hatrany ny indostrian'ny sarimihetsika Maraokana. Nitatitra ny bilaogy The View From Fez fa nanomboka ny 22 jolay 2008 ny nanatontosana ny Prince of Persia tao Oukaïmeden izay toerana lehibe indrindra fanaovana ‘ski’ ao Maraoka (na eto Afrika mihitsy aza angamba) :
Any Maraoka amin'izao fotoana izao ilay mpiantsehatra Islandey Gísli Örn Gardarsson mba hilalao ny ampahany lehibe amin'ny sarimihetsika vaovao novokarin'i Jerry Bruckheimer, Prince of Persia: The Sands of Time. Vao manomboka ny famokarana izany sarimihetsika izany. Mifototra amin'ny lalao video mitovy anarana aminy ilay horonantsary, ary ahitana ilay printsy be herimpo sy ny printsesy mpifaninana aminy manakana ilay mpanjaka mora tezitra amin'ny fandringanana an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny tadiom-pasika. Antenaina fa hitsidika an'i Fès ilay mpilalao mandritra ny fiatoana amin'ny filalaovana ny sarimihetsika .
Rehefa mijery sarimihetsika ianao amin'ny fotoana manaraka dia ankafizo amin'ny fandravahana ny tantara i Maraoka!